Raadi Muusena, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Taariikhda taariikhiga ah ee Giriiggu, muusiyaduhu waxay ahaayeen ilaahyo ku dhiirrigeliya dadka suugaanta, farshaxanka iyo sayniska. Sheekadii sagaalkii musalsal aawadood, dadku waxay ku sii hayeen raadinta hareeraha iyagoo rajeynaya inay caawimaad ka helaan hal abuurkooda. Waqtiyadan casriga ah, qoraaga Ingiriiska ah ee Robert Graves wuxuu qoray sheekooyin ku saabsan khuraafaadka iyo fikradaha caanka ah ee dib loo soo nooleeyay. Qorayaasha, gabayaaga iyo cayaartooyda qoob-ka-ciyaarka ayaa bilaabay inay ugu yeeraan Muses caawimaad iyo dhiirrigelin mar labaad. Waa wax shaki ah in qof uun runtii rumeysan yahay ilaahyada Griiga. Si kastaba ha noqotee, farshaxanno badan, kuwa jecel iyo dadka caanka ah waxay u arkaan inay yihiin muslimiintooda.
Xagee ayay dhiirigalinta runti ka timaadaa?
Micnaha dhabta ah ee erayga dhiirrinaya hab ku neefso ama ku afuuf wax , Rabbaaniga ama amakaagnimadu waxay gudbisaa fikrad ama run waxayna ku neefsataa ama ku afuuftaa qofka. Markay Masiixiyiintu ka hadlaan waxyiga, waxay rumaysteen inay ka heleen Ilaah fikrad. Markaa waxay moodayaan in qoraalkooda iyo hadalkooda uu yahay mid Eebbe u waxyooday iyo inuu ku hago figradooda iyo xirfadahooda.
Maxaa yeelay hal-abuurka wuxuu ka yimid xagga Ilaah, waxaan ugu yeeri karnaa madxafkeenna. Ruuxa Quduuska ahi waa kan ina hago, na hago, oo na dhiirrigaliya. Wuxuu inaga kaxeeyaa xaaladdeena khiyaanada wuxuuna nagu hogaamiyaa runta Ciise oo ah nolosha, runta iyo jidka. Haddii uusan neefsanayn nolosha aabaha aadeena, waxaynaan nolol la'aan ku noqon lahayn nolol ahaan. Isagu wuxuu inagu xoojiyaa xooggiisa wuxuuna naga buuxiyaa iftiinka mala-awaalkiisa ficil abuuris waa qeyb ka mid ah Eebbe laftiisa oo uu ina siiyay si uu noogu caawiyo nolosha iyo inaan nolosheena kobcinno. Waa qayb ka mid ah nolosha badan ee naloo ballan qaaday Yooxanaa 10,10. Hal-abuurnimadeena waxay noo oggolaaneysaa inaan sameyno waxyaabo badan oo aan loo baahnayn oo keliya, sida dhisidda guryaha iyo mashiinnada, laakiin sidoo kale waxay na siiyaan farshaxanka. Rabitaanka, laga yaabee xitaa rabitaanka in wax la abuuro, si qoto dheer ayeynu ugu dhex jirnaa oo waa mashiinka ka dambeeya howlaha badankeenna.
Sideen ugu oggolaan karnaa ilaahay inuu noqdo matxafka ina siiya jihaynta iyo dhiirigelinta aan u baahanahay iyo waxa aan u rajeynayno? Waxaan bilaabi karnaa ku celcelinta dhageysiga salaadda. Dadka intiisa badani way yaqaanaan qaabka caadiga ah ee salaadda: lahadalidda Ilaah, sharraxa dhibaatooyinkayaga iyo walaacyadayada, mahadnaqa iyo maamuusaya isaga, u duceeya dadka kale, iyo si fudud oo loo wadaago fikradaheena. Dhegeysiga salaadda waxay u baahan tahay edbin yar oo dheeraad ah maxaa yeelay waxay u baahan tahay aamusnaan. Way adag tahay in la aamuso inta lagu gudajiro salaadda sababta oo ah waxaan inta badan dareemeynaa baahida loo qabo inaan wax dhahno. Aamusnaanta ayaa noqon karta wax raaxo leh: fikirradeenu waxay u socdaan dhinac kale, waan mashquulsan nahay oo maaddaama aan codka Ilaah aan maqli karin, waxaan u qaadaneynaa inuusan nala soo xiriirin.
In la aamusnaado Ilaah hortiisa inta lagu jiro salaadda waxay qaadataa waqti iyo ku celcelin. Bilow ahaan, waxaad ka aqrin kartaa qoraal ka yimaada Kitaabka Quduuska ah ama buugga salaadda ka dibna waxaad diirada saartaa Ilaah oo weydiisaa inuu hago oo hago fikradahaaga. Markaad dareento rabitaan ah inaad hadasho, xusuusnow inaad dooneysay inaad wax maqasho oo aadan hadlin. Dallas Willard wuxuu qoray buug dhiirigelin leh oo la yiraahdo Dhageysiga Ilaah oo si faahfaahsan u sharraxaya sida loo maqlo. Dabcan, Ilaah aad ayuu uga badan yahay madxaf waana inaan fiirin karno isaga haddaan raadineynno dhiirrigelin iyo jiheyn dhammaan dhinacyada nolosheena. Isagu wuu ka sii jecel yahay inuu noqdo hanuuniyaheena oo had iyo goor wuu hadlaa oo wuxuu neefsadaa jacaylka iyo xigmadda annaga. Aan dhammaanteen baranno inaan maqalno codkiisa jacaylka si cad oo waadix ah.